Ini handigoni kurasikirwa nehuremu! Tsvaga zvinoitika uye kuti ungazvigadzirisa sei | Bezzia
Ini handigone kuonda: Tsvaga kuti chii chakaipa uye gadzirisa!
Susana godoy | 05/05/2021 12:00 | Welfare
Ini handigoni kurasikirwa nehuremu! Ndiyo imwe yemitsara yatakanyanya kutaura mukati mehupenyu hwedu. Naizvozvo, nhasi tichaedza kutsvaga zvirikuitika, chii chakashata nedhayeti yako uye kuti tingaigadzirise sei. Ichokwadi kuti munhu wega wega nyika yese uye kuti havazi vese vanoshanda zvakafanana zvirongwa.
Naizvozvo, isu tinofanirwa kutora nhanho diki kudzamara tawana izvo zvinonyatsoitika. Kuti uite izvi, zvinodikanwa kuti urambe uine simba rakawanda, nekuti kune vamwe vanhu kuonda kunogona kukurumidza kupfuura vamwe. Kunyangwe ndine chokwadi chekuti mune zvese izvi zviwanikwa zvakanaka zvichawanikwa. Tsvaga!
1 Sei ndisingakwanise kuonda?
2 Zvekuita kana ndikatadza kuonda
3 Ini handigoni kurasikirwa nehuremu! Ndeapi matanho andinofanira kutora?
Sei ndisingakwanise kuonda?
Wanga uri pane kudya asi nekufamba kwemazuva kana vhiki, hausi kuona mhedzisiro. Ipapo iwe unomira kuti ufunge kuti chii chiri kushandiswa kwesimba rakanyanya. Ehe, iko kuedza kune mubairo asi isu tinofanirwa kuchinjisa mamiriro acho zvakanaka kune mararamiro edu. Ini handigoni kurasikirwa nehuremu! Sei?
Mapuroteni anoshaikwa pane zvaunodya: Pasina kupokana, mapuroteni ndiwo musimboti wechero kudya kwakakodzera munyu. Nekuti ivo vari kuguta uye vanotibatsira kuti tisadya chikafu pakati pekudya. Uye zvakare, kuve akakwana kuti mhasuru dzikure.
Unoshaya mvura: Pasina kupokana, kunwa mvura yakawanda ndiyo imwe pfungwa yatinofanira kufunga nezvayo. Mvura yakakosha kuchenesa muviri wedu nekuzvimwisa mvura. Bheja pamvura ine ndimu kana infusions kana iwe uchiona zvichinetsa kunwa mvura wega.
Ngwarira nezve macaloric chikafu: Dzimwe nguva tinofunga kuti hadzinei nesu kana kuti hapana chinoitika kuvadya, asi zvinodaro. Kana iwe uri kuzvipa iwe zvishoma whims kunyangwe uchidzidziswa, vanogona kunge vari zvipingaidzo mukuremerwa kwako kurasikirwa. Makokoreti, mazaya echando kana macaloric snacks anogona kutiparadza.
Kushungurudzika: Zvinonzi kana isu takamanikidzwa zvakanyanya, yakawanda cortisol inogadzirwa mumuviri. Izvi zvinoita kuti zvive zvakaoma kupisa akawanda macalorie.
Zvekuita kana ndikatadza kuonda
Tinofanira kugara tichizviisa mumaoko evashandi vanokwanisa kuitira kuti vagotipa kutarisisa kune kwedu nyaya. Asi ichokwadi kuti padanho repamusoro, panogara paine matanho atinofanira kutora kana tisingakwanise kudzikisa huremu.
Usatakure nechishamiso kana chikafu chisina hutano: Kunyangwe ivo vachikuvimbisa kuti ucharasikirwa nemakirogiramu akati wandei pasvondo, usawira mumuedzo uyu. Unoda kudya kwakakwana uye kwenguva refu kana kuti pane, hupenyu hune hutano.
Usakanganwa kuwedzera makabhohaidhiretsi: Nekuti dzimwe nguva tinokanganwa, nekuti ichokwadi kuti vanogona kuve vanowedzera kuwedzera macalorie. Asi ndechimwe chinhu chatinoda. Sezvo ivo vari mukati mekudya kwakaringana uko ivo, mapuroteni nemiriwo zvinogadzira dhishi rakakwana.
Rara zvakanaka: Sezvo kuzorora kudiki kunokonzera kuti mamwe mahormone achinje uye kutisiira iwo iwo manzara enzara munzira inoenderera.
Usashandise kurovedza muviri nekuti kunyangwe isu tichifunga kuti ndeimwe yeakanyanya kudzikira uremu, zvakanakisa kuzvibatanidza pamwe nesimba rekushanda uye zvikamu.
Ini handigoni kurasikirwa nehuremu! Ndeapi matanho andinofanira kutora?
Isu tatoona zvimwe zvezvikonzero nei usingaorere huremu. Kune mamwe akawanda, nekuti sekutanga kwatatanga kutaura, muviri wega wega inyika. Kubva pane zvese izvi, isu ikozvino tave nekunzwisisa kwakajeka kwekuti nei tisingakwanise kurasikirwa nehuremu. Asi ikozvino ndiyo nguva yekutora matanho akakodzera ekuti udaro.
Kanganwa nezve kudya kwakanyanya uye sarudza chirongwa chehupenyu hwakanaka. Izvi zvinodaro nekuti vanosiya kumashure kweshuga, zvekutanga zvakabikwa uye zvakakangwa kana mafuta asina hutano.
Zvikamu zvina zvemiriwo uye anenge matatu servings yemichero zuva ravachave vabatsiri vako vakuru.
Mafuta acho achaenda mundiro yega yega asi muchimiro che maorivhi, chitsama nzungu, kana avocado.
Ndiro yako inofanirwa kugadzirwa nehafu yemiriwo, chimwe chikamu chemapuroteni uye chimwe chacho, chidiki, chemafuta.
Ita maekisesaizi zuva nezuva. Kufamba, kushambira, kudzidziswa simba kana chikamu chezuma nekutenderera mimwe mienzaniso.
Tora zvese sechinyakare mazuva ese uye iwe uchazotanga kuzviona sechimwe chinhu chakakosha chinoenderana neupenyu hwako uye kwete sekuwedzera kwekuedza uko kunogara kuchidhura isu zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Welfare » Ini handigone kuonda: Tsvaga kuti chii chakaipa uye gadzirisa!
Kukwidza Masitepisi: Zvese zvaunoda Kuti Uzive!
Chii chaunofanira kuona uye kuita muguta reCórdoba muAndalusia